ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana သည် IBC2014 တွင်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC2014 မှာမီဒီယာသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်
Fremont, CA - At IBC2014 အမ်စတာဒမ်အတွက်လာမည့်လတွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ယင်း၏မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူများ, ဖမ်းဆီးဖို့တည်းဖြတ်, ဝေစုများနှင့်အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြု application များတဲ့ suite ကိုကမ်းလှမ်းရာ - အဖြစ်လိုက်နာမှုသက်သေပြဖို့, ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana B9 ရပ်ခန်းမ 14 - ထို IBC စည်းဝေးကြီးအတွင်း EMEA Gateway မှာ၏တဲ၌ဤပလက်ဖောင်းပြပါလိမ့်မယ်။
သစ်ကို အသုံးပြု. ပညာရှင်များ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုမူရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် proxy ကို format နဲ့ feeds ကနေ content တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်; ပြင်ဆင်ရန်, ဖမ်းခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်စတိုးဆိုင်ကဗီဒီယို feeds; လျင်မြန်စွာမျိုးစုံတို့အတွက်အကြောင်းအရာ repurpose ပလက်ဖောင်းနှင့်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်, rebroadcast, Mam နှင့်သိမ်းဆည်းထိုသို့တင်ပို့; စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. အကြောင်းအရာရှာဖွေ; စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဗီဒီယိုကို log နှင့်စောင့်ကြည့်; နှင့်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဥပဒေရေးရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် Cross-functional ဖြစ်စေပူးပေါင်းဘို့အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကပလက်ဖောင်းစတင်ရန် IBC ထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာစဉ်းစားလို့မရဘူး," Arco Groenenberg, အရောင်းနှင့်အသံလွှင့်ထုတ်ကုန်များအဘို့စျေးကွက်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana။ "ဒီ features အသစ်နှင့်အတူကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အများဆုံးလျင်မြန်စွာပြန်လာအတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်သောကြောင့်ပလက်ဖောင်းခဲပါတယ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏အနီးကပ်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးထံမှလက်ခံရရှိတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့စာအိတ်တွန်းအားပေးစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်, ဒီဗဟိုချဉ်းကပ်ဖို့ပိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "
အဆိုပါ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအောက်ပါ applications များပါဝင်သည်:
တစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်ကြွယ်ဝဖမ်းယူလျှောက်လွှာမှတ်တမ်းများနှင့်စတိုးဆိုင်များ SDI, asi, asi-IP ကို, ATSC နှင့် QAM အချက်ပြမှုများအပါအဝင်ဟိုက်ဘရစ်သွင်းအားစု။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို formats 50 Hz, 60 Hz, SD ကပါဝင်သည် /HD နှင့် DVB-T A / C / S2 ။ ပလက်ဖောင်း encrypt လုပ်ထားတဲ့ကေဘယ်လ်ကနေမှတ်တမ်းတင် RF နှင့် Cable ကိုကတ်နည်းပညာအပြည့်အဝအတွက် feeds ထောက်ခံပါတယ် HD - တိုက်ရိုက် cable ကိုအဘို့အခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ off-air အင်တင်နာအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲခြင်းလိုအပ်နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်။ အစီအစဉ်လမ်းညွှန်အတွင်း parameters တွေကို setting အသုံးပြုပုံအသုံးပြုသူများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမှတ်တမ်းတင်အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင်နှင့် stand-alone DVRs ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, အချိန်နာရီချွေတာ, မျိုးစုံအပြိုင်အဆိုင်ဘူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်, မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအစွမ်းထက်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်လွှာအကြောင်းအရာ repurposing နှင့်တည်းဖြတ်သည့်အခါတစ်ဝှမ်းအမြန်အလှည့်အဘို့ခွင့်ပြုအသုံးပြုသူများတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ယခင်အသံသွင်းကနေဘောင်-တိကျဖြတ်ကလစ်များထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ OTT clipping နှင့်ကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြုလည်းဒီစနစ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါသည်။ တည်းဖြတ်မည်သည့်စံနှုန်းကို web browser ကိုသုံးပြီး desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက် web-based interface မှတစ်ဆင့် anyplace ကနေပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ အကြောင်းအရာမိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့ upload တင်နှင့်တည်းဖြတ်, Re-ထုတ်လွှင့်, Mam ဖိုင်တွေသို့မဟုတ်မော်ကွန်းတိုက်နောက်ဆုံးများအတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်မျိုးစုံကဗီဒီယို Feeds နဲ့ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်, မိုဘိုင်း, ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်မိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့မျိုးစုံပလက်ဖောင်းလျင်မြန်စွာသူတို့ကို repurpose သုံးစွဲသူများနိုင်ပါတယ်။ clips တည်းဖြတ်ရေး, Mam နှင့်သိမ်းဆည်းဖြေရှင်းနည်းများကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ NAS Connect ကိုလက်ရှိ Workflows သို့တိုးချဲ့ပြီးလွယ်ကူပေါင်းစည်းမှုများအတွက် NAS / SAN သိုလှောင်မှုမှချိတ်ဆက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းမှာလည်းန့်အသတ်အသုံးပြုသူအကောင့်များနှင့်အခန်းကဏ္ဍ Set-ups ခွင့်ပြုနဲ့ web စာတန်းထိုးနိုင်စွမ်းပေးပါသည်။
အဆိုပါ platform ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုသတ်မှတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana'' s ကိုအခြားစနစ်များအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာသို့ချဉ်းကပ်။ အသုံးပြုသူများရက်စွဲ, အချိန်နှင့် channel ကအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့-ပြေးနဲ့အသွားအလာမှတ်တမ်းများနီးကပ်စာတန်းအတွက်သော့ချက်စကားလုံးများ, တပ်လှန့်အစီရင်ခံစာများကရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ expression ရှာဖွေမှုများကိုအဆိုပါအမျှ Run ကို log ထဲတွင်တစ်ပြိုင်နက် keyword ကိုရှာဖွေမှုများကို enable နှင့် စာတန်းထိုး အပိုင်း။ တစ်ဦးက Boolean ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအတွင်းထည့်သွင်း AND, OR + နေဖြင့်ရှာဖွေရေးသတ်မှတ်ဖို့စေသည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအများအပြားစကားလုံးများကိုဆံ့ကြောင်းစာတန်းများကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ ရလဒ်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတစ်ခုဟိုက်ပါလင့်ခ်နှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်စာရင်းအတွင်းပါရှိသောနေကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည်လျှောက်လွှာပေါ်မှာမူတည်ပြီးအချိန်, ရက်စွဲနှင့်နှိုးဆော်သံပရိုဖိုင်းအားဖြင့်ရှာဖွေဖြစ်ကြောင်း, တိကျသောဦးစားပေးနှင့်အတူထုံးစံ profile များကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
အသုံးပြုသူများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, လိုင်စင်လိုအပ်ချက်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ log နှင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတိပေးချက်များ channel ကို, နေ့၏အချိန်, ကြာချိန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပျောက်ဆုံးနေအဖြစ်အမှား၏ရှေးခယျြမှုအပေါ်မှာအခြေခံစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် စာတန်းအချိန်, ရက်စွဲနှင့်နှိုးဆော်သံပရိုဖိုင်းအားဖြင့်ရှာဖွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးစားပေးအတူစတာတွေကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံ, အသံကျယ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုစိတ်ကြိုက် profile များကိုထူနိုငျသညျ။
အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှုနှင့်အရည်အသွေး, အပြိုင်အဆိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ချက်ကိုများနှင့်ပူးပေါင်းဘို့အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ NAVE (Nielsen အသံဗီဒီယိုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ) ကို DTV signal ကို၏အသံလမ်းကြောင်းထဲမှာ embedded နှင့်ဒေတာများ log နိုင်ပါတယ် watermarks extracts ။ အဆိုပါစနစ်, မှတ်တမ်းများ decodes နှင့်ရန်ရေမှတ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးပေးတယ်: Nielsen ရဲ့အိမျစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများမှသေချာလျော်သောဂီယာနှင့်ဖြန့်ဝေ; မည်သည့်အချက်ပြမှုကှာဟဘို့အ Real-time သတိပေးချက်များနှင့်အတူထိရောက်သော troubleshooting ကို enable; နှင့်သင့်လျော်သောကြော်ငြာနှုန်းထား၏ setting ကိုခွင့်ပြု, ကြော်ငြာ ratings အကြွေးအာမခံပါသည်။ ဒါဟာအစအကူအညီများ troubleshooting ထိပ်တန်းသတင်းများနှင့်အစီအစဉ်များအတွက်ဒါရိုက်တာရဲ့အသံလမ်းကြောင်းကိုပေးပါသည်။
- အိုင်ပက် / iPhone ကို encoding က
- REST API ကို
- 2x, 4x, 1 / 2x နှင့် -2x မှာပြန်ဖွင့်ဘို့ခွင့်ပြု Variable မြန်နှုန်းပြန်ဖွင်; ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ချက်များ, ကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြု, content တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် repurposing ကာလအတွင်းပိုမိုမြန်ဆန်စစ်ဆင်ရေးအားဖွင့်။
ဒီဖြေရှင်းချက်အော်ပရေတာလျော့နည်းဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူပိုမိုလုပ်ဆောင်ခွင့်တဦးတည်းယူနစ်အတွက်မျိုးစုံသွင်းအားစုလက်ခံကြောင်း Feature-rich ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ SDI, asi, asi-IP ကို, ATSC နှင့် QAM အချက်ပြမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပြင်, က SD ကထောက်ခံပါတယ် /HD, 50 Hz, 60 Hz နှင့် DVB-T A / C / S2 ကို formats ။ ဒါဟာအစအပြည့်အဝအတွက် feeds encrypt လုပ်ထားကေဘယ်လ်ကြိုးကနေမှတ်တမ်းတင် RF နှင့် Cable ကိုကတ်နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ HD။ ဒါဟာ built-in မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပွင့်လင်းအိုင်တီဆက်သွယ်မှု, Linux, OS ကို, RAID 6HDD နဲ့စက်မှုတန်း server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
Essentials (1RU server ကို), Pro နဲ့လုပ်ငန်း (3RU နှစ်ဦးစလုံး): အဆိုပါစနစ်အသုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ရရှိနိုင်
အကြောင်းအရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana
1996 ကတည်းက ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဆန်းသစ်အသိပညာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာနှင့်အတူဖောက်သည်အားပေးလျက်ရှိသည်။ မီဒီယာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဖြစ်နိုင်အဖွဲ့အစည်းများစစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ရရှိစေသည်။ တစ်ဦးကပြည့်စုံဝန်ဆောင်မှုအစုစုကိုမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစျေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးနှင့် analytics ပါဝင်သည်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုသင်ယူခြင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana Hyderabad နှင့် Coimbatore, အိန္ဒိယအတွက်ရုံးများနှင့်အတူ Fremont, California မှာရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ www.digital-nirvana.com
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana EMEA Gateway မှာ IBC IBC 2014 မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု သိုလှောင်ခြင်း 2014-08-28
ယခင်: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက််ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Multi-Screen ကိုဗီဒီယို Delivery ဘို့မဟာဗျူဟာ '' တိုင်းဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာ '' အမြော်အမြင်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: 100 အခမဲ့ DPA မိုက်ခရိုဖုန်း - မည်သို့သင့်ရဲ့ Wear သလား?